Banyere Anyị - Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd.
Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd. bụ a set imewe, mmepe, mmepụta, ahịa dị ka otu nke ọkachamara plastic ígwè ígwè emepụta. Na obodo ndị na-apụta ugbu a, triangle, nke a maara dị ka obodo China nke igwe plastik, zhangjiagang. Ọnọdụ ala dị elu, na azụmaahịa na nkwado azụmahịa dị mma.
Plastic imegharị ihe maka iji ngwá na extrusion akụrụngwa m ụlọ ọrụ nwere afọ 20 n'ichepụta ahụmahụ, kpọkọtara ọkachamara na oru otu, nwere zuru okè machining ngwá na-akwado ụlọ ọrụ, mmepụta usoro bụ nnọọ tozuru okè. Ugbu a isi ngwaahịa bụ oké nkume igwe nri, crusher maka tree, a gbọmgbọm akpa pụrụ iche grinder, otu / abụọ aro shredding igwe, otu / abụọ aro film shredding igwe, nnukwu anwụrụ raara shredding igwe, PET imegharị ihe maka akara, Pee / eyi film imegharị nhicha akara. , igwe na akụrụngwa inyeaka, akara ahịhịa extrusion na ngwaahịa ndị ọzọ. N'otu oge ahụ nwere ike inye pụrụ iche dị ka ndị ahịa chọrọ na gbajiri nkewa imegharị ihe maka iji ngwá.
Mmepe nke ụlọ ọrụ e-arapara n'ahụ àgwà mbụ, ọrụ mbụ nkà ihe ọmụma, mgbe niile ike update mmepụta teknụzụ na Filiks; Pursuchụso ịdị mma, ma na-eme ka ike ha dị elu mgbe niile; Anyị na-emeziwanye iji nye ndị ahịa ihe nkedo na usoro ịkpụgharị plastik na-arụ ọrụ nke ọma.
Na njikọta ụwa taa, mba ọ bụla ga-enwe mmekọrịta miri emi. Dị ka a Chinese enterprise, anyị ga-akwado echiche ka mma nke "mere na China" na-eje ozi zuru ụwa ọnụ ahịa.
Anyị ga-etinye aka na mmepụta na imegharị ihe maka ngwaahịa plastik, weta ngwa ọrụ dị mma na nchekwa nchekwa, ma mee akụkụ anyị na nchekwa gburugburu ebe obibi ụwa. Anyị na-alụ ọgụ maka nkwenkwe na anyị nwere ike imelite teknụzụ ngwa ngwa, mepụta ngwaahịa n'ụzọ dị irè karị ma megharịa plastik n'efu gburugburu ebe obibi.